Ny fampifangaroana endrika sy kanto | Maria Belousova
Home / Interior design / Ny fampifangaroana endrika sy kanto | Maria Belousova
2021 / 06 / 19 FisokajianaInterior design 7199 0
Navoakan'i Eos Interior Design Alliance voalohany
Toetr'andro ao an-trano
Maria Belousova dia mpamorona tanora sy tsara tarehy avy any Okraina. Izy dia mahay manome hatsaran-tarehy amin'ny habaka miaraka amina endrika malefaka sy madio. Amin'ireto tranga roa ireto dia nampiasa teknika kanto ny mpamorona mba hamoronana tontolo anatiny sy kilasy ambony sy mafana, mametaka ny endrika amam-panahy kanto ary mampihena ny kalitaon'ny habakabaka.
Ny famolavolana ny fotsy madio
Ny loko fotsy dia maneho fisandratana ara-panahy avo lenta, miaraka amin'ny fihetsika maverika sy ny tolo-kevitra, manomboka resonance lalina eo amin'ny olona sy ny habakabaka, ny olona sy ny fiainana.
Ny mpandrafitra dia nanaingo ny latabatra, birao ary ny kabinetra tamin'ny marbra turquoise mba hanehoana ny vokany mifanaraka amin'ny maso, mba tsy ho banga kely ny habaka ary hitondra endrika sy fampiononana bebe kokoa, izay mitarika ny toe-tsain'ilay habaka.
Ny tontolo misokatra dia maneho ny fiainam-piainana lalina iray, ary ny fahatsiarovana ny trano dia hipetraka tsikelikely avy amin'ny traikefa ara-batana sy ny fahatsapana an-tsehatra.
Ny sofa modular dia feno fahitana miavaka, ary ny endrika tsy manam-paharoa fitambarana habakabaka dia feno gadona zavakanto, misy ny fiarahan'ny hatsarana mirindra, ny hakantony ary ny firafitra telo-refy mahazatra mandritra ny famolavolana ny habaka.
Ny famolavolana ny habaka dia mifototra amin'ny fahatsapana, ary ny sary an-tsaina ny lanitra dia manana tongotra azo ampiharina, izay fototra iorenan'ny famolavolana endrika.
Eo ambanin'ny borosin'ilay mpamorona, ny lokon'ny volondavenona sy fotsy samy hafa dia mifangaro tsara, ary ny fifandonana ireo fitaovana sy ny feo dia mamoaka fofona kanto.
Ny endrika tsy simetrika sy ny fanovana ara-materialy dia mitohy mamorona endrika eny amin'ny habakabaka, ary ny gadona milamina amin'ny habaka dia mamela ny olona hamela ny tenany vetivety, hamonjy ny eritreriny sy ny introvert ary hanitrika ny tenany amin'ny fandanjalanjana mafana ao anatiny satria tokony.
Ny firafitra ankapobeny dia manaraka ny fitsipiky ny fihenjanana sy ny fialan-tsasatra, ary ny fahatsapana metaly metaly dia milaza ny fihetseham-po maneho ny habaka.
Ny famafazana taila eo amin'ny fandroana dia manome endrika hatsarana vaovao. Eo ambanin'ny fandikana ny vy sy ny hazavana, dia mamorona ny fomba fahitana maso marina fotsiny.
Toerana misy ny lamandy misokatra
Ao amin'ny efitrano malalaky ny efitrano fandraisam-bahiny, ny mpamorona dia mamorona rindrina misy lavaka izay mikoriana sy mamindra ny tara-pahazavana eo amin'ny habakabaka, mamorona aingam-panahy madio ary manome fe-potoana fiadanan-tsaina feno fonosana voajanahary ny mpiorina.
Ny metrikan'ny openwork dia manana gadona mirindra, ary rehefa mijery azy ianao dia manafina ny filaminana sy ny hakanton'ny manodidina ny fijery farany.
Ny gorodona misokatra ao an-dakozia dia misandratra kely mba hamaritana ny fetran'ny saha manokana, ary ny mpamorona dia mampiasa hazavana ampiarahina amin'ny fitaovana madio mba hamoronana fahatsapana ambaratongam-pahefana ao amin'ny habakabaka.
Ny mpamorona dia nisafidy ny hampiasa fitaovana rustic mba handikana ny soritry ny firenirenen'ny hazavana, ary ny voajanahary matevina sy matevina amin'ny hazo mafy dia manome poezia ambany ambany na aiza na aiza.
Ny hazavana voajanahary dia ampidirina ao amin'ny efitrano amin'ny alàlan'ny varavarankely, manome endrika malefaka sy mampitony ny habaka, ary ny fitambaran'ny hazo maitso mavana sy voalohany dia miteraka fahatsapana sosona.
Ny saha malalaka dia mampiasa hazavana sy aloka ho toy ny lamba lamba sy fitaovana ho fitaovana hamoronana toe-tsaina milamina sy milamina, toy ny hoe mbola mijanona ny fotoana amin'izao fotoana izao.
Ny efitrano fidiovana lehibe dia natao miaraka amin'ny maitso avocado feno fahatsapana voajanahary, malalaka ny habakabaka ary be rivotra, ary mifanentana ny tonony kanto, mahazo fialan-tsasatra voajanahary ny saina ary miditra amin'ny tontolo ara-panahy milamina.
Ny famolavolana ny trano fidiovana ho an'ny besinimaro dia mitaky fahaiza-mandanjalanja, tsy mendri-piderana, fa amin'ny fikatsahana ny fahalavorariana farany amin'ny antsipiriany.
Previous :: Fiolahana mahitsy, fifampiraharahana mandehandeha, fironana vaovao amin'ny birao samihafa sy mahomby | Yuqiang Design Next: Ahoana ny fomba famolavolana Patio milentika izay tsara kokoa 100 heny noho ny Patio nentim-paharazana?